Harena an-kibon’ny tany: maro ny gaboraraka | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany: maro ny gaboraraka
Ahitana tsy fanarahan- dalàna avokoa ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, miainga any amin’ny fitrandrahana, ny fitaterana, ny fanondranana any ivelany, ny antontan-taratasy, sns. Mikaondoha mitady vahaolana ny fanjakana.
Hatao, anio eny Ivato, ny atrikasa ho fakan-kevitra hiadiana amin’ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany. Nambaran’ny minisitra tompon’andraikitra, Ravokatra Fidinarivo, omaly, fa saika ahitana tsy fanarahan-dalàna avokoa ny sehatra samihafa ao anatin’ity tontolon’ny harena an-kibon’ny tany ity. Midadasika ny tsy fanajana ny lalàna. Singanina amin’izany ny tsy fisian’ny antontan-taratasy ara-dalàna samihafa, ny fitrandrahana gaboraraka, ny tsy fanajana ny tontolo iainana, ny fitaterana tsy ara-dalàna vatosoa amin’ny fiarabe, ny tsy fanajana ny kalitao, ny tsy famerenana ny vola vahiny azon’ny mpandraharaha amin’ny fanondranana any ivelany, sns.
Nomarihin’ny minisitra Ravokatra Fidinarivo fa fakan-kevitra ity hatao eny Ivato ity fa tsy fanapahan-kevitra. Mandray anjara avokoa ny sehatra voakasika rehetra, ny mpitrandraka, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpitatitra, ny mpanondrana any ivelany, ny rafi-panjakana isan-tsokajiny, ny sns. Angonin’ny fanjakana ny fehinkevitra mivoaka eo, ary hovolavolaina havadika ho lalàna na fepetra, entina hatsarana ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany.
Miisa 5 000 ny fangatahana
Izay ny antony anisan’ny mahatonga ny fampiatoana ny fizarana fahazoan-dalana, izay manodidina ny 5 000 ny fangatahana. Satria tsy maintsy apetraka mazava ny lalàna ahafahana manatsara ity sehatra ity. Noraisin’ny minisitra, ohatra, ny mikasika ireo mpandraharaha mitahiry fahazoan-dalana nefa tsy manao na inona na inona akory eo amin’ny toerana ampolo taony. Raha ny lalàna mantsy, tsy azo atao na inona na inona ny mpandraharaha rehefa mahaloa ny saran’ny fahazoan-dalana (frais d’admnistration) any amin’ny fanjakana. Efa lany andro izany ka mila hatsaraina sy havaozina satria tokony hojarin’ny manana fahazoan-dalana ny toerana nangatahany.